Shelf Corporation uye Aged LLC Ruzivo uye Matipi
Chii chinonzi Shelf Corporation / Aged Corporation?
"Masherufu mubatanidzwa," anozivikanwawo se "mubatanidzwa wemakore," kana "akura rafu kambani”Kana uchinongedzera kune LLC, semuenzaniso, ikambani yakatoumbwa, asi isiri kushandiswa, uye yakagadzirira" kutenga "nemuridzi mutsva. Kune zvikonzero zvakawanda zvekuti vanhu vanotenga masherufu emakambani. Kune rimwe divi, kune zvimwe zvinhu zvekutarisira kunze kana uchifunga rimwe remakambani aya "akagadzirira kugadzirira".
Dzvanya kuti uone yedu LIST YEMAHARA MAKAMPANI
Nei ndichifanira kushandisa kana kuwana Shelf Corporation?
Izvo zvine basa rekucherechedza kuti zera harisi iro rega chinhu. Zvichida haisi chinhu chikuru mubhizinesi uye kukweretesa hukama, kuita bhizinesi, kiredhiti, kana zvibvumirano zvezvivakwa. Sekambani yakasimbiswa inogona kuchengetedza imwe nguva. Ndokunge, haufanire kupfuudza maitiro ese uye nenguva yekumirira kuti ugadzire mubatanidzwa mutsva. Zvizhinji zvingangoita bhizinesi zviwanikwa zviri kuzeza kuita nyowani nyowani kana kumusoro-kutanga makambani. Nekudaro, nekambani iripo, unogona kuenda kwavari sechinhu chakasimbiswa icho chave chiripo chaizvo. Zviripachena, iyo yakawanda makore iyo kambani yave iripo, zvirinani. Naizvozvo, zvinowanzoitika kuti shamwari dzako dzebhizinesi dzinotora kambani yako zvakanyanya. Saka nekudaro, izvi zvinogona kupa rako bhizinesi kuwana mukana kune hukama bhizinesi.
Kuti zvive pachena, kuvimbika kunowedzera, mumaonero edu, kana iwe ukashandisa kambani kunyatsoita bhizinesi; kwete chete nenhamba yemakore mumwe munhu akamisa kambani pasherefu. Hukama uhwu hunogona kusanganisira zvibvumirano, Dun & Bradstreet-mhando masystem masisitimu, nezvimwewo, zvinogona zvakare kutariswa pakutarisa kune vangangoita makambani akura. Pamusoro pezvo, zvakakosha zvakanyanya kuti iwe utore masherufu aya emakambani kubva kunovimbika masosi. Semuenzaniso, isu tinoenda kure kure kuti tiite zvakaomarara zvekudzura avo vane mukana kana zviripo mutoro.
Kambani Yakakwegura Inokupa Kuvimbika Here?
Paunenge iwe uchinge wasarudza nemazvo sherefu yako yemubatanidzwa, iyo kambani inokurumidza kufailisa nhoroondo. Izvo zvinokupa iwe kuvimbika kwekukasira kwekambani yako uye yemubatanidzwa mufananidzo? Hatigone kuti izvozvo zvinonyatsoitika. Asi, ko kana ukasarudza kambani inoenderana nenhamba yemakore yaunenge uchinyatsoita mhando yebhizinesi ichaitwa nekambani?
Nomuzvarirwo, hapana vimbiso yekuti iwe unobva wakwanisa kubhidha pazvibvumirano zvehurumende. Nenzira, nyika dzinowanzove nemitemo yekureba kwenguva yakareba kumakambani avanobvumidza kubhida pazvibvumirano zvavo. Hativimbise kuti iwe uchazokwanisa kuwana mitsara yechikwereti zviri nyore. Isu hativimbise kuti iwe unowana zvikwereti kubva kuDiki Bhizinesi Rekutungamira kana mabhangi mudunhu rako. Kana isu hatifunge kuti iwe unokwanisa kukwezva vangangove varimari zvirinyore nekambani "yakasimbiswa". Chinokosha ndechekuti, iva akatendeseka. Rega vamwe vazive kuti iwe uchangobva kuwana kambani, kana zvirizvo.
Sezvatataura pamusoro apa, chinhu chimwe chakakosha zvakanyanya. Iwe unoda kuverengera kuti masherufu mubatanidzwa wauri kufunga hauna chero zvikwereti zviripo kana zvinononoka. Kune chikamu chikuru, iwe unogona kuzvivimbisa iwe nezve izvi nekutarisa munhoroondo yekambani. Semuenzaniso, iwe ungangoda kuongorora kuti huwandu hwezviitiko zvebhizinesi zvaive zvekuti mumwe munhu akanyorera EIN. Pamwe yakavhura account yekubhangi.
Pane zvimwe zvingasarudzika pamutemo uyu. Kune dzimwe nguva apo makambani akasimbiswa kwazvo anovharirwa, nekuda kwezvikonzero zvakasiyana. Izvi zvinogona kuve zvine hunhu hwakakosha nekuda kwekugara kwavo kana huwandu hwenguva mukuvapo. Masangano akakodzera anogona kunyatsoikwenya kuitira zvikwereti nekufumurwa. Makambani akwegura ari kudiwa zvakanyanya. Zvakare, icho chinodikanwa uye mutengo unowedzera zvichienderana nekuti yakareba sei yakagadzwa.
Zvichitaurwa zviri nyore, kana iwe uri kutenga yakwegura kambani yakananga kubva kune varidzi vayo, iwe unofanirwa kuita imwe yakakodzera kushingairira. Iwe unofanirwa kuve unonetsekana kana munhu kana boka rinotengesa rakakwegura mubatanidzwa raita mune chero zviitiko; kunyanya idzo dzinogona kuburitsa imwe mhando yechisimba mune ramangwana rekambani kana varidzi vayo. Izvi zvinogona kunge zvisiri nyore nguva dzose kuongorora, uye zvinoda kuti imwe nyanzvi inyatsoongorora. Maitiro akanakisa ekuita ndeyekungowana akwegura kana masherufu emakambani kubva kune vanozivikanwa vanopa (kana vatengesi). Iye mupi anofanira kunge aine nhoroondo yekubudirira kwekutengesa mune iyi nhandare. Unogona kutarisira kune vanopa izvi kuti vape kuripira kumutengi. Ichi chivimbiso chinonzwisisika pamusoro pezvikwereti zvisati zvavapo kana zvikwereti. Uye zvakare inofanirwa kuitisa zvine musoro kushingairira isati yapa shefu resheni yekutengesa.
Kazhinji nguva Shelf kana Aged Corporations vanovhiringidzwa ne Shell Makambani, zvese maererano netsananguro uye chikonzero chekuvapo. Kuvhiringidzika uku hakugone kuve kwakakanganisa zvakanyanya. Makambani eShell zvikamu zvakasiyana zvachose, zvese muchiyero uye mukuumbwa.
Sangano reShell ikambani inosanganisirwa isina chero chinhu chakakosha kana chimiro chekushanda. Inogona kunge iri US chikamu kana yeInternational Bhizinesi Corporation (IBC). Iwe unogona kuve neako wega Investment Kambani (PIC), kumberi kambani kana "mailbox" kambani. Kune zvimwe zvikonzero zviri pamutemo zvekuvapo kwemakambani emakomba. Semuenzaniso, vamwe nyanzvi vanoshandura makambani emakobvu kuva makambani anotengeswa neruzhinji. Nyanzvi dzinoita izvi kuburikidza nekunyorwa kwakadzama uye kubvumidzwa nemasangano akakodzera ehurumende nemitemo. Aya makambani anowanzo kuve akabatanidzwa nemabhizinesi aripo. Tinodaidza izvi zvinonzi a dzosa kubatanidzwa. Iyi ndiyo imwe nzira iyo munhu anogona kuenda kuruzhinji nekukurumidza uye nemazvo.
Sirifu uye Aged Corporation Kubatsira
Kuchengetedza nguva nekufanotaura nguva nemubhadharo wekuumba kambani nyowani
Kuwana ipapo ipapo kubvumirano yechibvumirano kunogona kusakwanisika mune zvese zviitiko. Zvibvumirano zvakawanda zvekubhidha zvinoda kuti kambani yako ivepo kwenguva yakatarwa. Ive neshuwa yekutarisa pane kesi-ne-kesi hwaro uye shandisa kuzara kwakazara nezvekuti wawana riini kambani yako.
Instant kambani kutora.
Kufaira kwekambani kwenguva refu.
Inogona kuve inokwezva kune vangangoisa mari uye mari yekudyara. Zvinonzwisisika pane zvinodikanwa kuti zviitwe zvakakodzera zvemutemo mafirita. Zera rekambani, roga, rinongova chinhu chidiki.
Chivabvu kana kusagona kuwana nekukurumidza uye nyore kuwana kukwereta. Zvekare pane zvimwe zvinhu zvine huremu hwakawanda senge bhizinesi chikwereti chiyero uye purofiti.
Kunyange zvakadaro, isu tinokurudzira kutendeseka uye kuburitswa kuzere kune iro zuva rawakatora kambani yakura.
Kukanganisa uye Mapako
Chimbo-chaivepo mutoro mukana
Inogona kuitika pre-iripo chikwereti nyaya
Ma-pre-aripo bhizinesi zviitiko zvinogona kutungamira kune ramangwana chikwereti
Kune mamwe mabhenefiti akanakisa ekushandisa akwegura masherufu makambani. Chinhu chakakosha kutenga chinzvimbo kuburikidza nekambani ine mbiri ine mukurumbira kwenguva refu. Sangano redu rinopa makambani akwegura ari kutengeswa. Muvambi weGeneral Corporate Services, Inc., iyo kambani inotarisira iyo Makambani Incorporate brand, yakatanga kambani muna 1906. Yedu manejimendi manejimendi anga aripo kubva 1991. Inzwa wakasununguka kufona kana kuzadza fomu reruzhinji reruzhinji pane ino peji. .
Yakagadziridzwa Kuwedzeredzwa muna Zvita 15, 2019